I-Holland | umthetho wabucala
Lo mgaqo-nkqubo wabucala uqokeleleke ukuba uncede abantu abachaphazelekayo ukuba bafumane njani ulwazi oluyaziwa ngokuba 'buqu boLwazi lobuqu' (PII) kwi-intanethi. Njengoko kuchaziwe kumthetho wabucala we-EU kunye nokhuseleko lolwazi, olu lwazi olunokusetyenziswa ngokwakho okanye kolunye ulwazi ukuchonga, ukuqhakamshelana, okanye ukufumana umntu ongatshatanga naye, okanye ukuchonga umntu othile ngokomxholo. Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wethu wabucala ngononophelo ukuze ufumane ukuqonda okucacileyo malunga nendlela esiqokelela, sisebenzisa ngayo, sikhusele okanye ngenye indlela siphathe uLwazi lwakho oluBalulekileyo ngokuhambelana newebhusayithi yethu.
Nceda qaphela: Lo mgaqo-nkqubo wabucala wenziwe I Holland Limited (e-UK) kwaye ukuphinda-phinda okanye ukuhambisa lo mgaqo-nkqubo kuya kuthathwa njengelungelo lokushicilela ngaphandle kwemvume yangaphambili evela kuthi.
Luluphi uLWAZI LOKUQHELEKILEYO OLUQOQOSHELWA NGABANTU ABABONAKALISA IBHODI YAKHO, I-WEBSITE OKANYE I-APP?
Xa usenza iodolo okanye ubhalisa kwindawo yethu, njengoko kufanelekile, unokucelwa ukuba ufake igama lakho elipheleleyo, igama lenkampani, idilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni, i-URL yeWebhusayithi okanye ezinye iinkcukacha zokukunceda ngamava akho kunye nokubonelela ngezisombululo kunye neenkonzo ezifanelekileyo. ezihlangabezana neemfuno zakho.
SIBUZA LUXOLELO NINI?
Siqokelela ulwazi kuwe xa ubhalisela iphetshana leendaba, uphendula kuvavanyo, ugcwalisa ifomu, sebenzisa ingxoxo ebukhoma, vula itikiti lenkxaso okanye faka ulwazi kwindawo yethu. Siqokelela ulwazi malunga nendlela ophendula ngayo kwiinkonzo zethu ezinokubandakanya ukulandelwa kwe-imeyile ngendlela yokuvula kunye nokucofa kunye nokurekhodwa komntu ongaziwayo.
SILUSETYENZELA NJANI IINKCUKACHA ZOMNIKI?
Sinokusebenzisa abathengi kunye nolwazi lombutho esiqokelela kwezi ndlela zilandelayo:
Ukubonelela ngenkonzo kunye nokukhupha iimvumelwano / izivumelwano
Ukuphucula iwebhusayithi yethu kunye neenkonzo ukuze zikusebenzele ngcono njengomthengi
Ukuvumela ukuba sikunike inkonzo engcono ekuphenduleni izicelo zenkonzo yabathengi
Ukulawula ukhuphiswano, unyuselo, uphando okanye ezinye izinto ezikwisayithi
Ukubuza iireyithingi kunye nokuphononongwa kweenkonzo okanye iimveliso ozithengileyo
Ukulandela imbalelwano (okt incoko ehleliyo, i-imeyile okanye imibuzo ngefowuni)
Ukucwangcisa inkonzo okanye imveliso yangaphandle okt, uGoogle Analytics
Ukubonelela ngezinto kunye nembalelwano ngeposi.
SIKUKHUSELA NJANI ULWAZI LAKHO?
Indawo yethu yewebhu iskena rhoqo kwimingxunya yokhuseleko kunye nobuthathaka obaziwayo ukuze wenze utyelelo lwakho kwindawo yethu ikhuseleke ngokusemandleni. Sisebenzisa iSkena seMalware rhoqo. Ulwazi lwakho lomntu siqu luqulathwe ngasemva kunxibelelwano olukhuselekileyo kwaye lufikeleleka kuphela linani eliqingqiweyo labantu abanamalungelo akhethekileyo okungena kwiinkqubo ezinjalo, kwaye kufuneka bagcine ulwazi luyimfihlo. Ukongeza, yonke ingcaciso ebucayi / yekhredithi oyibonisayo ifihlwe ngetekhnoloji yeSecurity Socket (SSL) yomnikezeli wentlawulo wesithathu (GoCardless). Sisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokhuseleko xa umsebenzisi engena, engenisa, okanye efikelela kulwazi lwabo ukugcina ukhuseleko lweenkcukacha zakho. Zonke izinto ezenziweyo zenziwa ngomboneleli wesango kwaye azigcinwanga okanye zigqitywe kumaseva ethu ukuze kongezwe uxolo lwengqondo.
NDINGALUNGA NJANI UKUZE NDIKUSUSE ISIQINISEKISO SAM SENGCALI?
Ukuqinisekisa ukuba idatha yakho ichanekile, ingexesha kwaye ichanekile kubalulekile kuthi, ke ngoko siye sayila ikhonco lenkqubo ekuvumela ukuba uvuselele ulwazi lwakho lobuqu njengoko kwaye kufuneka njalo. Ungafikelela koku ngokundwendwela I Holland limited (e-UK) Indawo yeNtlawulo kunye nokuhamba ngokujonga iphepha "Iprofayile" yeakhawunti yakho.
Ukuba ungathanda ukususa ulwazi lwakho buqu kwiinkqubo zethu "ilungelo lokulibaleka" ungasihambisa isicelo sakho kwiGosa loKhuseleko lweDatha (i-DPO) uDavid Hinds kwaye siya kuqinisekisa ukuba isicelo sakho sizalisekiswa ngokukhawuleza. Unokwenza oku ngokuthumela isicelo nge-imeyile ulwazi@iholland.co.uk ngesihloko esithi "UkuSuswa Kuyafuneka" kunye nolwazi olucelwayo ongathanda ukususwa kwiinkqubo zethu.
Ngenye indlela, ungasebenzisa eyethu ifom yesicelo sedatha ukuze ucele idatha esiyibambe ngawe, ukuthathwa, ukususwa kwedatha kunye nokunye okuninzi.
NGABANI BASEKUFUNDI BENKXASO-MALI?
Apha ngezantsi sidwelise imibutho esebenza njengephrosesa elisebenzayo I Holland limited (UK). Le yimibutho ebambe, yokugcina okanye ukucwangcisa idatha egameni I Holland Limited (e-UK) kwaye ziphicothisiwe ukuthobela iGDPR.
Umhlaba weSiza (iiseva)
Nabanye abantu abangabanini bebonke I Holland Limited (e-UK) or I Holland limited (UK). imibutho exhasayo.
Iikuki ziifayile ezincinci ezithi isayithi okanye umboneleli wayo weenkonzo azigqithisele kwikhompyuter yakho kwi-browser yakho yeWebhu (ukuba uyavuma) eyenza iisayithi okanye iinkqubo zomboneleli ngenkonzo zikwazi ukukhangela isikhangeli sakho kwaye zibambe kwaye zikhumbule ulwazi oluthile. Umzekelo, sisebenzisa iicookies ukusinceda ukuba sikhumbule kwaye senze izinto kwinqwelo yakho yokuthenga. Zikwasetyenziselwa ukusinceda ukuba siqonde ukuthanda kwakho ngokusekelwe kwimisebenzi yangaphambili okanye yangoku yendawo, esenza ukuba sikwazi ukukunika iinkonzo eziphuculweyo. Sikwasebenzisa iicookies ukusinceda ukuba siqulunqe idatha edibeneyo malunga nokugcwala kwesiza kunye nokuhlangana kwendawo ukuze sikwazi ukubonelela ngamava angcono esiza kunye nezixhobo kwixesha elizayo. Ungajonga ulwazi oluthe kratya malunga nendlela esizisebenzisa ngayo ii-cookies kwiwebhusayithi yethu ngokundwendwela indawo yethu ulwazi lwecookie phepha.
Asithengisi, asithengisi, okanye sitshintshele kwamanye amaqela ulwazi lwakho oluchazayo ngaphandle kokuba sinika abasebenzisi isaziso sangaphambili. Oku akubandakanyi ukubamba iwebhusayithi kwiwebhusayithi kunye namanye amaqela asincedayo ekusebenziseni iwebhusayithi yethu, ukuqhuba ishishini lethu, okanye ukunceda abasebenzisi bethu, ukuba nje loo maqela avumayo ukugcina olu lwazi luyimfihlo. Sinokukhupha ulwazi xa ukukhutshwa kwayo kufanelekile ukuthobela umthetho, ukunyanzelisa imigaqo-nkqubo yethu, okanye ukukhusela amalungelo ethu okanye amalungelo abanye abantu, impahla okanye ukhuseleko. Nangona kunjalo, ulwazi olungacacanga lomntu ngokobuqu lunokunikwa amanye amaqela okuthengisa, ukuthengisa, okanye ezinye izinto.
Sisebenzisa intengiso yeGoogle AdSense kwiwebhusayithi yethu. UGoogle, njengomthengisi weqela lesithathu, usebenzisa iicokies ukukhangela iintengiso kwindawo yethu. Ukusetyenziswa kukaGoogle kwicookie ye-DART kuyenza ukuba isebenzise iintengiso kubasebenzisi bethu ngokusekwe kutyelelo lwangaphambili kwindawo yethu nakwezinye iisayithi kwi-Intanethi. Abasebenzisi banokuphuma ekusebenzeni kwicookie ye-DART ngokundwendwela umgaqo-nkqubo wabucala weGoogle kunye ne-Network Network.
IINDLELA ZOKUQALISA NGOKUGQIBELA
Ngamanye amaxesha, ngokuqonda kwethu, singabandakanya okanye sinikeze iimveliso zenkampani yesithathu okanye iinkonzo kwiwebhusayithi yethu. Ezi zindawo zenkampani yesithathu zinemigaqo-nkqubo yabucala ehlukeneyo kunye nozimeleyo. Ngoko ke, asinalo uxanduva okanye uxanduva lomxholo kunye nemisebenzi yalezi ziza ezixhunyiwe. Nangona kunjalo, sizama ukukhusela ingqibelelo yesayithi yethu kwaye samkela nayiphi na ingxelo malunga nalezi ziza.
Ukuba ungathanda ukuphuma kwimvume yethu yekuki, nceda undwendwele ulwazi lwecookie iphepha lemiyalelo yendlela yokwenza oku. Unokuphuma nokuthengisa ii-imeyile zethu kwintengiso ifom yesicelo sedatha kwaye siya kuqinisekisa ukuba isicelo sakho sizalisekiswa ngokukhawuleza.
INDLELA YOKUZIPHATHA KWAKHONA INDLELA YAKHO ASIQHUTYELANI IIMPAWU?
Njengombutho wokuziphatha onaso kwaye siya kuhlala siwukhumbula u-Sukungalandeli imiqondiso kwaye Ungazilandeleli izaziso. Asisoze sityala ikuki, okanye sisebenzise intengiso xa kusenziwa umatshini wesikhangeli.
NGABE IBANDLA LAKHO LIYAVUMA UKUTYHUTYELWA KWEEMPAHLA?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba siyavumela ukulandelelwa kokuziphatha komntu wesithathu kwiwebhusayithi yethu kubandakanya iGoogle Analytics kunye nokuCofa. Ngolwazi oluthe kratya nceda undwendwele yethu ulwazi lwecookie iphepha. Ukuba ungathanda ukuphuma ekulandeleni indlela yokuziphatha, nceda uthumele isicelo nge-imeyile ulwazi@iholland.co.uk
IZIQINISEKISO ZEENKCUKACHA ZOBUCHULE
Ukuze sihambisane neNkqubo yoLwazi oluLungileyo siya kuthatha le nyathelo elilandelayo lokuphendula, ukuba kuye kwenzeka ukwaphulwa kwedatha:
Nxibelelana neeprosesa zethu / iqela lesithathu ukuze sibeke iinkqubo zethu zokuphula idatha kunye neenkqubo
Yazisa abantu abachaphazelekileyo ngaphandle kokulibazisa okungafanelekanga malunga nokophula umthetho xa kunokuba ngumphumo omkhulu kumalungelo abo kunye nenkululeko
Yazisa igunya lokugada ukuze senze imisebenzi yethu
Yazisa iOfisi yoMkomishinala woLwazi (i-ICO) ngolwaphulo olwenziweyo kwisithuba seeyure ezingama-72 ukuba uyazi, nokuba asinazo zonke iinkcukacha
Beka inkqubo yethu yokuvavanya ubungozi obunokubakho kubantu abathile ngenxa yokophula umthetho
Sisenokususa okwethutyana ukufikelela kwinkonzo yethu ngokupheleleyo, ukwenzela ukunciphisa umngcipheko nokukhusela idatha ebucayi esiyibambayo
Ukuphuma ('ilungelo lokuchasa'):
Ilungelo lokucima ('ilungelo lokulityalwa'):
Ukuqinisekisa ukuba idatha yakho ichanekile, ihlaziyiwe kwaye ichanekile kubalulekile kuthi, ke ukuba iinkcukacha zakho zitshintshile kufuneka usazise nge-imeyile okanye ngefowuni kwangoko. Ukuba ungathanda ukususa ulwazi lwakho buqu kwiinkqubo zethu "ilungelo lokulibaleka" ungathumela isicelo sakho ngesiqu sethu ifom yesicelo sedatha kwaye siya kuqinisekisa ukuba isicelo sakho sizalisekiswa ngokukhawuleza.
Ilungelo lokufumaneka kwedatha livumela umntu ngamnye ukuba afumane kwaye asebenzise idatha yakhe yobuqu ngeenjongo zabo kwiinkonzo ezahlukeneyo. Ibavumela ukuba bahambe, bakhuphele okanye bagqithise idatha yabucala ngokulula ukusuka kwindawo enye ye-IT iye kwenye ngendlela ekhuselekileyo nenqabisekileyo, ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza kwayo. Ungasithumela isicelo sakho ngelethu ifom yesicelo sedatha kwaye siya kuqinisekisa ukuba isicelo sakho sizalisekiswa ngokukhawuleza. Unokuphuma ngokundwendwela iphepha leNtengiso yokuThengisa iNyathelo lokuqala okanye ngokusebenzisa uHlolo lokuKhangela isiKhangeli ku-Google. Ukuba ungathanda ukuphuma kwimvume yethu yekuki, nceda undwendwele ulwazi lwecookie phepha.
UKUYA KUFUMANEKA NGEKHANTSHE
Siyavuma oku kulandelayo:
Ungasebenzisi izikhokelo zobuxoki okanye ezilahlekisa okanye iidilesi ze-imeyile.
Ukuchonga umyalezo njengesikhangiso ngendlela efanelekileyo.
Faka idilesi engokwenyama yoshishino lethu okanye kwikomkhulu le-site.
Ukubeka iliso iinkonzo zokuthengisa i-imeyile ye-email ukuthotyelwa, ukuba enye isetyenziswa.
Hlonipha ukuphuma / ungabhalisi izicelo ngokukhawuleza.
Vumela abasebenzisi ukuba bangabhalisi ngokusebenzisa ikhonkco phantsi kwe-imeyile nganye.
Ukuba ngaba naluphi na ixesha unqwenela ukuzibhalisa ekufumaneni ii-imeyile ezizayo, ungasithumela nge-imeyile ulwazi@iholland.co.uk . Unokulandela nemiyalelo engezantsi kwe-imeyile nganye. kwaye siya kukususa ngokukhawuleza BONKE lelana.
I-COPPA (UMNYANGO WOKHUSELEKILEYO WABAKHUSELEKILEYO WOKUKhusela abantwana)
Xa kuziwa ekuqokeleleni ulwazi lobuqu kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala, umthetho wokhuselo lwabucala lwabantwana kwi-Intanethi (i-COPPA) ubeka abazali kulawulo. Ikhomishini ye-Federal Trade Commission, i-arhente yokukhuselwa kwabathengi yase-United States, inyanzelisa uMgaqo we-COPPA, ocacisa oko kusebenza kwiiwebhusayithi kunye neenkonzo ze-Intanethi ekufuneka zikwenzile ukukhusela ubumfihlo babantwana kunye nokhuseleko kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele, ukuba asizithengisi iinkonzo zethu kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo malunga nale polisi yabucala, ungaqhagamshelana nathi usebenzisa olu lwazi lungezantsi:
I Holland Limited (e-UK)
Inkampani Hayi: 0115 972 6153
Nge imeyile: ulwazi@iholland.co.uk
Ukuba oku akuphendulanga umbuzo wakho, nceda unxibelelane neqela lethu ulwazi@iholland.co.uk Ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.